မက်ဆီ ဟာ လူငယ်အသင်းမှာ ဘာကြောင့် ဖရီးကစ်လုံး၀ မကန်ခဲ့ရတာလဲ ? - SPORTS MYANMAR
မက်ဆီ ဟာ လူငယ်အသင်းမှာ ဘာကြောင့် ဖရီးကစ်လုံး၀ မကန်ခဲ့ရတာလဲ ?
လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရဲ့ ဖရီးကစ် အရည် အသွေး ဟာ ဒီနှစ်တွေ ထဲမှာ သိသိ သာသာ တိုးတက် လာခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ကို ဖရီးကစ် ပေးကန် တာဟာပင်နယ်တီပေးလိုက် ရသလို ပါပဲ လို့တောင် ပြောရတဲ့ အထိ ဖြစ်လာခဲ့ တာပါ ။ မက်ဆီ ဟာ ဘောလုံး သမား ဘ၀ တစ်လျောက် မှာ ဖရီးကစ် ကနေ ၅၂ ဂိုး အထိ သွင်းယူ ထားပြီး ရိုနယ်ဒို ကို လိုက်မီ တော့မှာ ဖြစ်သလို Top Ten စာရင်းထဲ ဝင်ရောက် နိုင်ဖို့လည်း အလားအလာ ကောင်းနေ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် မက်ဆီ ဟာ ပင်ကိုယ် မွေးရာပါ ဖရီးကစ် စပါယ်ရှယ်လစ် တစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့ သလို လူငယ် ကစား သမား ဘ၀ တုန်းကလည်းဖရီးကစ်မကန်ရသလောက် နည်းပါး ခဲ့ ပါတယ် ။ ဘာဖြစ်လို့ လည်း ဆိုတော့သူ့ထက်ပိုပြီးဖရီးကစ်ကောင်းသူတွေ ရှိနေခဲ့ လို့ပါ ။
မက်ဆီ နဲ့ အတူ လာမာစီယာ အကယ်ဒမီ ကို ဖြတ်သန်း ခဲ့ဖူးတဲ့ အသင်းဖော်ဟောင်း ရော်ဂျာ ဂီရီဘတ် က လူငယ် အသင်းမှာ ဖရီးကစ် စပါယ်ရှယ်လစ် ၂ ယောက် ရှိပြီး အဲဒီ အထဲ မှာ မက်ဆီ မပါခဲ့ဘူး လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“ဗစ်တာ ဗက်ဇ်ကွက် က ကျွန်တော်တို့အသင်းမှာဖရီးကစ်အကောင်းဆုံးပါ။ဘယ်သန် တွေ ထဲမှာ ဆိုရင် ကလောက်ဆီ က အကောင်းဆုံး ပါပဲ ။ ကွင်းရဲ့ ဘယ်ဘက် မှာ ဖရီးကစ် ရတယ် ဆိုတဲ့ အပေါ် မူတည်ပြီး သူတို့ ၂ ယောက် ကန်ကြ ရပါတယ် ။ မက်ဆီ ကတော့ မကန် ရသလောက် ကို နည်းခဲ့ တာပါ” လို့ ဂီရီဘတ် က ပြောပြ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဖရီးကစ် ကန်သွင်းမှု ကောင်းမွန် ခဲ့ ပေမယ့် အဲ့ဒီ လူငယ် ၂ ယောက်ရဲ့ ဘ၀ ကတော့ မက်ဆီလို မထွန်း တောက်ခဲ့ ပါဘူး ။ မက်ဆီ ထက် အသက် ၆ လ ပိုကြီးတဲ့ ဗစ်တာ ဗက်ဇ်ကွက် ဟာ စီနီယာ အသင်းမှာ ၃ ပွဲ သာ ကစားခွင့် ရခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ မှာ ကလပ် ဘရုဂေး ကို ရောင်းထုတ် ခံခဲ့ရ ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ ဖရီးကစ်အရည်အသွေးတွေဟာလည်း နူးကမ့်ကနေ ထွက်ခွာရမှု နဲ့ အတူ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဘယ်သန် ဖရီးကစ်ရှင် ကလောက်ဆီ ကတော့ ဗက်ဇ်ကွက် ထက် ဆိုးတဲ့ ကံကြမ္မာ ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ မက်ဆီ ထက် လအနည်းငယ်သာ ငယ်တဲ့ ကလောက်ဆီ ဟာ ၂၀၀၆ မှာ ကတည်းက လူလျော့စီမံကိန်းမှာ ပါသွားခဲ့ပြီး ဘ၀ တစ်လျောက်လုံး စပိန် ရဲ့ အောက်တန်း လိဂ်တွေ မှာသာ ကျဉ်လည် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင် အသင်း မှာ လက်ထောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ဖာနန်ဒို ဆစ်ဂနိုရီနီ က တော့ ဒီယေဂို မာရာဒိုနာ ဟာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရဲ့ဖရီးကစ် အရည် အသွေး ကို တိုးတက် လာအောင် လေ့ကျင့် သင်ပြ ပေးခဲ့ ဖူးတယ် လို့ ပြန်ပြောင်း ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မာရာဒိုနာ ဟာ အာဂျင်တီးနား လက်ရွေးစင် အသင်း ကို ကိုင်တွယ် ခဲ့ဖူးပြီး သူ့ရဲ့ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ ဖလား ပြိုင်ပွဲဝင် အသင်း မှာ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ပါဝင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ထိုစဉ် က အသက် ၂၂ နှစ်ကျော်ရုံသာ ရှိသေးတဲ့ မက်ဆီ ဟာ ဖရီးကစ် မှာ ထူးချွန် ပြောင်မြောက်သူ အဖြစ်ခဲ့ သေးပါဘူး ။
“ဒီယေဂို ကွင်းထဲ ရောက်လာပြီး မက်ဆီ ဖရီးကစ် ကန်နေတာတွေ ကို ကြည့်နေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက် မှာတော့ ‘လီယိုလေး ၊ လီယိုလေး ၊ဒီကိုလာပါဦး၊နောက်တစ်ခါ လောက် ထပ် ကြိုးစား ကြည့်စမ်းပါ’ လို့ သူ ပြောခဲ့ပါတယ်”
“နောက်ပြီးတော့ သူက ‘ဘောလုံး ကို ဒီမှာထား ၊ပြီးတော့မင်းခြေထောက်ကိုဘောလုံး နဲ့အဝေးကြီးကိုမြန်မြန်မရောက်သွားစေနဲ့၊အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဘာလိုချင်သလဲ ဆိုတာ မင်း သေချာ သိတော့ မှာ မဟုတ်ဘူး’ လို့ မက်ဆီ ကို ပြောခဲ့ ပါတယ် ။မက်ဆီ ရဲ့ကန်ချက် က ဂိုးအပေါ် ထောင့်ထဲ ကို တန်းဝင် သွားခဲ့ တာပါ ။ မက်ဆီ ရဲ့ မျက်နှာ မှာလည်း လေးစား အားကျတဲ့ ပုံရိပ်တွေ ပေါ်လာ တော့တာပါပဲ” လို့ ဆစ်ဂနိုရီနီ က ပြောပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ် မှာ သူ့ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဘောလုံး သမား ဘ၀ ပထမဆုံး ဖရီးကစ် ဂိုး ကို အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် နဲ့ ကစားတဲ့ ပွဲမှာ သွင်းယူ ခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် နှစ် အတော် ကြာသည် အထိ မက်ဆီ ရဲ့ ဖရီးကစ် သွင်းဂိုးဟာသိသိသာသာ တက်မလာခဲ့ဘဲ နောက်ဆုံး ၆ နှစ် အတွင်းမှာမှ ဂိုး ၃၀ နီးပါး သွင်းယူလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ။
ယနေ့ မှာတော့ လီယွန်နယ် မက်ဆီ ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရည် အသွေး တွေထဲမှာ သေမင်းတမန် ဖရီးကစ် ဟာ လည်း တစ်ခု အပါ အဝင် ဖြစ်လို့ နေခဲ့ ပါပြီ ။
ဂျူဗင်တပ် ၊ မန်စီးတီးကို ကျော်ပြီး ယူနိုက်တက်ဆီကို ဘာကြောင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာလဲ ဆိုတာ ပြောပြလိုက်တဲ့ ဗန်ပါစီ